Finoana - mahita ny Fiangonana tsy hita maso sy maneran-tany amin'Andrimanitra Switzerland (WKG)
I Paoly dia namaritana izany ao amin'ny 2 Korintiana 4,18 toy izao: Izahay izay tsy hitantsika amin'ny hita maso, fa amin'ny tsy hita. Satria ny hita maso dia ara-nofo; fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Io no tena nampisy azy rehetra. Izay no fototry ny finoana. Ny fahitana ity toe-javatra vaovao misy antsika ao amin'i Kristy ity dia manova ny fisainantsika rehetra, ao anatin'izany ny zavatra mety hiainantsika amin'izao fotoana izao. Rehefa mahita ny tenantsika ho velona ao amin'i Kristy isika dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny fomba ahafahantsika miatrika ny raharaha amin'ity fiainana ankehitriny ity.